nepaldoor.com: सेना बन्य यसरी योग्य भए पूर्वलडाकु
खरिपाटीमा तालिम लिइरहेका पूर्वलडाकु (सैनिक पोशाकमा), राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुसँग । फाइल फोटो/नेपाली सेना
खैरेनीटार (तनहुँ) । २१ हप्ताअघि पश्चिम तालिम केन्द्रमा सैन्य तालिमका लागि आएका एमाओवादीका पूर्व लडाकुको आचरण हेर्दा सैनिक प्रशिक्षकलाई लागेको थियो– उनीहरु सैन्य नियमको परिधिमा कसरी आउलान्् ? राजनीतिक बहसमा रुमल्लिएका र सामान्य घरेलु व्यायाम गरेका उनीहरु सैनिक ढाँचाको तालिममा कसरी पारंगत होलान् अनि सेनाप्रति उत्तरदायी होलान् या नहोलान् ? तर, २१ हप्ताको तालिमपछि सैनिक प्रशिक्षकहरु आश्वस्त भएका छन् । राजनीतिक विचारधाराले निर्देशित पूर्व लडाकुहरु फलामे सैनिक अनुशासनभित्र आइपुगेका छन् । खैरेनीटारकै उदाहरण हेर्ने हो भने यहाँ पदिक तथा अन्य दर्जाका लागि आएका ८९ मध्ये फेरि अबकास रोजेका र भागेकाबाहेक हाल ८५ जनाले तालिम लिइरहेका छन् । उनीहरु नेपाली सेनामा काम गर्न योग्य छन् ।
खैरेनीटारको पश्चिम पृतना सैनिक शिक्षालयका प्रमुख सेनानी विनोद खड्काको अनुभव छ, ‘पूर्व लडाकु (विशेष सैन्य)हरु अनुशासित र सैनिक पद्दतिमा आइसके । सैनिक हुन उनीहरुलाई अब केही पनि समस्या छैन ।’ खैरेनीटार गाविस ९ मा २०६४ सालमा स्थापित शिक्षालयमा तालिमका लागि सैनिक हेडक्वार्टरले विशेष सैन्यहरुलाई मंसिर १० गते पठाएको थियो । ‘उनीहरुले शिक्षालयमा आठहप्ता गुजारिसकेका छन्, अधिकांशको गतिविधि अत्यन्तै उत्साहजनक छ’ खड्काले यसै साता खैरेनीटार पुगेका रक्षा संवाददाताहरुलाई तालिमबारे ब्रिफिङ गरे ।
सेनाले पूर्व लडाकु (विशेष सैन्य)लाई पूर्वी पृतना शिक्षालय मोरङ, नंवर २ सैन्य तालिम गुल्म हिले, मध्यपश्चिम पृथता शिक्षालय सुर्खेत, नंवर ५ सैनिक तालिम केन्द्र बोराडाँडी धनगढी, एकीकृत सैनिक तालिमकेन्द्र सालझुण्डी, सैनिक तालिम केन्द्र त्रिशुली नुवाकोट र सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी भक्तपुरमा बेग्लाबेग्लै तालिम दिइरहेको छ । यीमध्ये त्रिशुलीमा महिलाहरुलाई र खरिपाटीमा अधिकृत तहका विशेष सैन्यले तालिम लिइरहेका छन् ।
खैरेनीटार तालिम केन्द्रमा ९ वटा अस्थायी क्यान्टोन्मेन्टबाट विशेष सैन्यहरु आएका थिए । ‘उनीहरुमध्ये एकले अर्कालाई चिन्दैनथे, शरिर पनि व्यवस्थित थिएन’ खड्काले भने, ‘२१हप्ताको तालिम सकिँदा उनीहरु केही मोटाएका छन्, शरिर व्यवस्थित छ । अब आठहप्तामा योग्य सैनिक भएर निस्किन्छन् ।’ आठ अप्तापछि उनीहरुले थप ब्रिजिङ कोर्स गरेर लेसनायक, नायक, हवल्दार, जम्दार, सुवेदार हुन पाउनेछन् ।
पश्चिम शिक्षालयले विशेष सैन्यलाई दुईवटा बेग्लाबेग्लै प्लाटुन बनाएर राखेको छ । ‘एउटा कक्षामा ११ जना राखेर तालिम दिइरहेका छौँ’ कर्नेल खड्काले भने । तालिममा २६ देखि ३० बर्ष उमेरका ८४ प्रतिशत विशेष सैन्य छन् । तालिममा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य छन् ३९ बर्षीय रामवहादुर मगर । तालिम केन्द्रका अर्का प्रशिक्षकका अनुसार मगरले बाध्यतामा तालिम लिन आएको बताउने गरेका छन् । ‘पहिला लडाकुमा पनि बाध्यताले भर्ना भएँ, अहिले सेनाको तालिम पनि बाध्यताले गरिरहेको छु, मेरा लागि हिजो पनि ठीकै थियो, अहिले सेनामा आएर पनि ठीकै छ’ मगरले भन्ने गरेका छन् ।
खैरेनीटारमा तालिमरतमध्ये ४१ जना एसएलसी पास, ४ जना आई ए वा सो सरह पास गरेका छन् भने कक्षा आठ पास गरेका २४ जना र कक्षा ५ मात्र उत्तिर्ण गरेका ९ जना छन् । कम्पनी सहकमाण्डरदेखि फ्रन्ट गार्ड (तल्लो तह) हैसियतका पूर्व लडाकुले पदिक तथा अन्य दर्जाका लागि तालिम लिइरहेका छन् ।
पूर्व लडाकुलाई सेनाले नेपाल एकीकरणको इतिहास, अन्तराष्ट्रिय युद्धको इतिहास, सैनिक ऐन, नियमावली, अनुशासन, कल्याणकारी कोषलगायतका बारेमा सैद्धान्तिक शिक्षा दिएको छ । ‘हामी नेपाली सेना भइसक्यौं भन्ने ज्ञान उनीहरुलाई दिलाएका छौँ र मनोवैज्ञानिकरुपमा उनीहरुले त्यसको अनुभूति गरिसकेका छन्’ कर्नेल खड्काको अनुभव छ, ‘तर बाहिर चर्चा गरिएजस्तो हामीले ब्रेनवास गर्ने भन्ने हुँदैन । यो पदावलि सेनामा काहिँ पनि प्रयोग हुँदैन ।’ सेनाले तालिममा पेलान गर्ने डर बोकेका पूर्व लडाकुले अहिले आश्चर्यचकित परेको अनुभव सुनाउने गरेको पनि खड्का बताउँछन् ।
‘हामीले लङ मार्च, दौडलगायत सेनाले गर्ने सबै शारिरीक तालिम गराएका छौँ, उनीहरुले सजिलै ती सबै अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा गरेका पनि छन्’ कर्नेल खड्काले भने, ‘आर्मीले विगतको रेकर्ड राखेको छ, भिडियो खिचेको छ र तालिममा बेस्सरी पेल्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा उनीहरु रहेछन् । अहिले क्लियर भइसक्यो, उनीहरु नै आश्चर्यचकित परेका छन् ।’ खड्काको तालिम दिने अनुभवमा पूर्व लडाकुहरु सेनाप्रति अभिप्रेरित भइसकेका छन् र उनीहरुमाथि कुनै पनि थप निगरानी गरिएको छैन । पूर्व लडाकुहरु उमेर अनुसार तालिम गर्न सक्ने भएका छन् र उनीहरुले सक्षम पनि सावित गरेका छन् ।
तालिमका लागि आएकामध्ये उदय गुरुङ, विश्वराज नेपाली र सुरज खड्काको सेनाले उपचार गराइरहेको छ । गुरुङलाई दमको समस्या देखिएको छ भने खड्कालाई छारेरोग लागेको देखिएको छ । ‘उनीहरु पहिल्यै विरामी रहेछन्, शुरुमा भनेनन् । हामीले थाहा पाएपछि उपचार गराइरहेका छौँ’ खड्काले भने । तालिममा गएकामध्ये दुईजना भागेका छन् । पूर्व लडाकु मीनवहादुर गुरुङ गत पागुन १७ गते र विनोद तिमल्सिना चैत १२ गते भागेका हुन् । आठहप्ता तालिम गरेर भागेका गुरुङ बढी तौलका कारण तालिम गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए । ललितपुर लेलेका तिमल्सिना पनि युद्धमा बमले लागेर कान सुन्न नसक्ने अवस्थाका थिए । तालिम लिएकामध्ये विक्रम थामी र लाखधन राईले १२ वैशाखमा पुनः स्वेच्छिक अवकास रोजेका छन् । उनीहरुलाई सेना समायोजन समन्वयकर्ता तोकिएका सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले जनही दुईलाख ५५ हजार रकम दिएर बिदाही गरेका थिए । सेनासँग विगतमा बन्दीपुर आक्रमणमा सहभागी रहेका थामीले युद्धकालमै दुईपटक मेरुदण्डको अपरेसन गरेका कारण तालिम गर्न नसक्ने बताएर बाहिरिएका थिए । राईले भने श्रीमती जागिरे भएकाले कठिन तालिम गरेर जागिर नखाने इच्छा देखाएर अबकास रोजेका थिए ।